Onyinye kacha mma Amazon na-enye maka taa (31-01-2018) | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-aga n'ihu na onyinye ndị Amazon na-enye anyị kwa izu, onyinye a kapịrị ọnụ ejiri oge, ma ọ bụ ejedebe na nkeji ole na ole. N’isiokwu a anyị ga-egosi gị onyinye kacha mma dị ugbu a, ọ bụrụhaala na ị zụrụ tupu 12 elekere taa, ebe ọ bụ na nke ahụ ga-abụ mgbe onyinye ahụ kwụsịrị.
N'ime taa, anyị ga-ahụ nyocha elekere 29 nke anụ ọhịa LG maka naanị 379 euro, ama sitere na ụlọ ọrụ French Alcatel maka euro 79, igwefoto igwefoto si Yi (Xiaomi) maka naanị 29 euro gbakwunye onyinye ndị ọzọ karịa ihe na-atọ ụtọ ị nwere ike ịchọta n'okpuru.
1 29 Inch Curved ikanam Nyochaa
2 Alcatel 5 nke ama ama
3 Igwefoto igwe kọmpụta nke igwe
4 Onye nnata iPhone Qi
29 Inch Curved ikanam Nyochaa
LG na-enye anyị ụdị 29UC88-B, ihe ngosi 29-inch curved na mkpebi HD zuru oke 2.560 x 1.080 nwere akụkụ nke 21: 9, ịbụ usoro kachasị mma iji rie ihe nkiri, kamakwa, inwe ike ịrụ ọrụ na abụọ ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ mepere na ihuenyo, ekele maka obosara ọ na-enye anyị. Enwere ike gbanwee ihe nlele a ma n'ogo ma na ọchịchọ, ọ bụ otu n'ime ole na ole anyị nwere ike ịchọta njirimara ndị a n'ahịa. Usualgwọ ya bụ euro 415, mana obere oge anyị nwere ike inweta ya naanị euro 379.
Zụrụ LG 29-inch curved monitor
Alcatel 5 nke ama ama
The French ike Alcatel na-enye anyị U5 nlereanya, a smartphone na a 5-anụ ọhịa ihuenyo na isi nkọwa ezigbo maka WhatsApp, Facebook na obere ihe. Site na igwefoto azụ 8, 16 GB nke nchekwa dị n'ime na 1 GB nke Ram, anyị nwere ike ịnweta ekwentị gam akporo a dị ala naanị 79 euro, mgbe ọnụahịa ya bụ 89 euro.
Igwefoto igwe kọmpụta nke igwe
Site na igwefoto ụgbọ ala Yi, anyị nwere ike ịdekọ vidiyo na ogo 1080 na 30 fps site na iji nlele elele nke ogo 130 yana inwe ike ịnụ ụtọ ọdịnaya niile anyị na-edekọ site na ihuenyo LCD nke 2,7-inch. Anya m na-enye anyị oghere nke f / 2,0 na-enye anyị ohere ịdekọ na obere ọkụ. Na mgbakwunye, ekele maka njikọ WiFi, anyị nwere ike ịnweta ngwaọrụ ozugbo na ekwentị anyị. Ọnụ ego a na-enye nke igwefoto ụgbọ ala Yi bụ 29,99 euro, 10 euro dị ọnụ ala karịa ọnụahịa ya na mbụ, nke bụ 39,99 euro.
Onye nnata iPhone Qi
IPhone ọhụrụ nke 2017, erutela ahịa maka ụgwọ ikuku na-echere ogologo oge nke na-enye anyị ohere ịkwanye ngwaọrụ ahụ site na ịtụkwasị ya n'elu ntọala Qi na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na n'oge a, ịghị ezube imegharị ngwaọrụ gị, mana ị ga-achọ ịnụ ụtọ ọrụ a, ekele maka Onye na-anabata iPhone Qi, anyị nwere ike ịgbakwunye sistemụ ikuku ikuku na iPhone anyị, ọ bụrụhaala na anyị ejiri ikpe, nke bụ onye na-ahụ maka ijide mpempe akwụkwọ pere mpe nke jikọtara n'ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ iji tinye ọrụ a. Ya na mbụ price bụ 9,99 euro, ma ruo etiti abalị anyị ga-enwe ike zụta ya naanị euro 7,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Onyinye kacha mma Amazon na-enye maka taa (31-01-2018)